Pixel 4 XL ga -enwekwa ụdị coral | Androidsis
Pixel 4 XL ga-ebikwa na ụdị agba agba
N'ihe dị ka otu ọnwa, na mmalite nke Ọktoba, a ga-egosiputa igwe Google ohuru. Ndị a bụ Pixel 4 na Pixel 4 XL, nke anyị na-enweta nkọwa zuru oke ọnwa ndị a. A maara atụmatụ nke ngwaọrụ abụọ ahụ, anyị nwekwara ike na-atụ anya mmelite na igwefoto gị. Ugbu a ụdị ọhụrụ nke ekwentị na-agbapụta na usoro agba.
Google mara mma na nhọrọ agba ya, dịka a na-ahapụ ekwentị ha na oji na ọcha. Ọ bụ ezie na ọ dị ka Pixel 4 XL ga-eweta nnukwu mgbanwe na nke a, jiri oroma ọhụrụ ma ọ bụ agba coral ọhụrụ a, nke enwere ike ịhụ na foto dị n'elu.
Akara a ga-abanye n'ụdị dị mma n'okwu a, jiri azụ nwere otu agba, n'adịghị ka ọgbọ ndị gara aga. Black, na-acha ọcha ụdị na-atụ anya na ugbu a anyị maara na a ga-enwe nke atọ Pixel 4 XL, oge a na agba coral. A-eji obi ụtọ na agba na ọtụtụ ndị ọrụ ga-amasị.
Dị ahụ akwadoghị ihe ọ bụla banyere ịdị adị nke agba a. Nke a bụ ihihi nke dịrịla ruo ugbu a, mana ọ dị ka enwere ntụkwasị obi. Ọ bụ ezie na anyị agaghị ahapụ obi abụọ maka izu ole na ole, mgbe a na-egosipụta ụdị ọhụụ ndị a.
Google maara na Pixel 4 XL a nwere ọrụ dị mgbagwoju anya, mgbe ahia dara ogbenye nke ọgbọ gara aga, akwụ ụgwọ ekele maka Pixel 3a. Njem ihe nrụpụta nke ndị nrụpụta na-arụ ọrụ nke ọma, mana ha na-achọkwa ime ka ọgbọ ọhụrụ a nke ekwentị dị elu nweta ezigbo ahịa. Ihe ịma aka n'ihu nnukwu asọmpi na nke a.
Ya mere, n'ezie ha na-ahapụ anyị na ndozi na Pixel 4 XL a, na mgbakwunye na ngbanwe mgbanwe ahụ e kwuru n'elu ma ugbu a nhọrọ ọhụrụ na agba. Anyị ga-ege ntị na ozi ndị ọzọ gbasara ekwentị na-esote ọhụụ nke akara America, nke ga-ewepụta ọtụtụ okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Pixel 4 XL ga-ebikwa na ụdị agba agba
Otu esi nwetaghachi akaụntụ Tinder gị ma ọ bụrụ na egbochila ma ọ bụ kwụsịtụrụ